Shina: Hanadio ny aterineto? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Febroary 2019 6:14 GMT
Nilaza momba ny fivoriana vao haingana tao amin'ny MIIT ny Beijing News, namintina sy nanazava ny politika anatin'ny fepetra 5 (amin'ny dikanteny Danwei):
1. Mametraka lisitra mainty mba hanakanana ny tompon'ireo anaran-tsehatra hita fa mandika lalàna mba tsy hahazo anaran-tsehatra fanampiny.
2. Manamafy ny dingana fisoratana anarana mba hiantohana fa marina ny antontan-taratasy fangatahana rehetra. Famindrana anaran-tsehatra
3. Tsy ho voavaha ny anaran-tsehara tsy voasoratra anarana:
Matetika voasoratra anarana amin'ny MIIT ireo tranonkala eo an-toerana, saingy efa nisy talohan'ny fametrahana ny rafitra fisoratana anarana ny sasany tamin'izy ireo, ary tsy nisoratra anarana ny sasany tamin'ireo tranonkala. Maro ireo anaran-tsehatra vahiny tsy voasoratra anarana amin'ny MIIT. Mety voasakana ny famahàna anaran-tsehatra amin'ireny tranonkala ireny, ka mety hidiran-doza ny fidirana avy any Shina. (Fanamarihana: Fijirihana DNS amin'ireo tranonkala tsy voasoratra anarana)
4. Fampiatoana ny tolotra DNS ho an'ireo tranonkala mandika lalàna sy ho an'ireo anaran-tsehatra hafa manana anaran-tsehatra mitovy.
5. Fametrahana ny birao fisoratana anarana: efa nandray fepetra tamin'ireo mpanome tolotra telo ny CNNIC: Zhengzhou Dahuang Network Development Company, Beijing Xinnet Digital Information Technology Company, ary ny Beijing Blinux Network Technology Company.
Taloha, dia nikendry ireo tranonkala ampiantranoina ao amin'ny lohamilina eo an-toerana, toy ny tranonkala any ampitan-dranomasina ny rafitra fisoratana anarana tranonkala, nosakanan'ny Great Fire Wall (GFW – fanivanana aterineto) teo ambany rafitra fanivanana na fanivanana voambolana manandanja ireo tranonkala ara-politika saro-pady. Na dia izany aza, mbola afaka miditra amin'izany ireo mpiserasera amin'ny alalan'ny proxy na TOR. Raha hanadio ny aterineto manontolo ny MIIT, dia hamadika ny aterineto Shinoa ho anaty intraneto ary hanimba ny ankamaroan'ny fitaovana fandinganana izany.
Na dia izany aza, tsy mbola mazava tsara raha hiitatra any amin'ny tranonkala vahiny ny rafitra fisoratana anarana. Araka ny antontan-taratasy ofisialin'ny MIIT momba ny hetsika iadiana amin'ny fiparitahan'ny pôrnôgrafia amin'ny fitaovana finday, ny dingana voalohany (Nov-Des 2009) tamin'ny hetsika fanadiovana dia nanomboka tamin'ny fandraràna ny fisoratana anaran'ny tsirairay amin'ny anaran-tsehatra CN. Ny dingana faharoa, izay tafiditra ao anatin'izany ny voalazan'ny Beijing News (fanamafisana ny fisoratana anarana tsy misy filazalazana manokana ho an'ny tranonkala any ivelany), dia hatao eo anelanelan'ny Jan-Sep 2010. Ny dingana farany dia eo anelanelan'ny Oktobra sy Desambra 2010. Ahitana fanarahamaso feno sy fandalinana ny angon-drakitra sy ny loharanom-baovao an-tserasera ireo fepetra mba hamantarana ireo hetsika tsy ara-dalàna sy tsy mahazo fankatoavana.